Garabyada suuqa shaqada oo ka tashanaya soogalootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maanta ayaa wadahadal wuxuu u bilowdey ururada shaqaalaha. sawir: Adam Wrafter/SvD/TT
Garabyada suuqa shaqada oo ka tashanaya soogalootiga
Ururada shaqaalaha iyo shaqa bixiyayaasha oo ka wada xaajoonaya soogalootiga.
La daabacay fredag 6 oktober 2017 kl 10.35
Maanta ayaa wadahadal wuxuu u bilowdey ururada shaqaalaha iyo kuwa shaqa bixiyayaasha si ay soogalootiga cusub iyo dadka shaqa la’aanta mudada dheer dalkan ku ahaa ay suuqa shaqada u dhexgali lahaayeen.
Belal Alshaghouri oo dalka Suuriya ka yimid ayaa sheegey in xalka arrinkaasi ku jiro in mushaara hoose dadkaas lagu shaqaaleysiiyo:
-Marka hore waxaa ila wanaagsan in qofku shaqa mushaarkeedu hoseeyo ka shaqeeyo, markuu xiriiro badan yeeshana uu markaas shaqa fiican raadsado waayo mushaar hooseeyaa waxay ka fiican yihiin shaqa la’aan, ayuu yiri Belal Alshaghouri.
Soogalooti badan oo dalkaan soo galey laga soo bilaabo sanadkii 2015-kii ayaa khasab ka dhigtey in xal gaar ah loo raadsho, loona sahlo sidii dadkaasi suuqa shaqada dalkaan ku dhexgali lahaayeen.
Ali Ali oo dalka Ciraaq ka yimid hal sano iyo bar ka hor ayaa qaba in mushaara hoose oo dadkaas la siiyaa uusan xalku ku jirin:
-Maya, taasi ma aha wax wanaagsan. Aniga oo kaligey ah waxaan bishii u baahnahey dakhli dhan ugu yaraan 20 000 oo karoon si aan ugu daboolo ijaarka, tigidka aan gaadiidka ku raaco iwm. Qoysaskuna waxay ugu yaraan u baahan yihiin ugu yaraan 35 000 oo karoon ama ilaa iyo 40 000 oo karoon bishiiba, ayuu yiri Ali.
Dawladda dalkaan ayaa soo dhaweyneysa raja fiicanna ka qabta wada hadaladaan maanta u bilowdey bilowdey ururada shaqaalaha iyo kuwa shaqa bixiyayaasha si xal loogu helo shaqooyin loo abuuro soo-galootiga cusub iyo dadka mudada dheer dalkan Sweden shaqa la’aanta ku ahaa.